“Radio NUG စတင်တော့မည်”… – PVTV Myanmar
“Radio NUG စတင်တော့မည်”…
·5months ago ·39 Comments
“Radio NUG စတင်တော့မည်”
ပြည်သူလူထုနဲ့ အဆက်အသွယ်မပြတ်ရှိနေစေဖို့အတွက် အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ က Radio ထုတ်လွှင့်ရန် ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ မကြာမီ အချိန်တွင် စမ်းသပ်ထုတ်လွှင့်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သတင်းကောင်းပါးအပ်ပါတယ်။
Radio NUG အစီအစဉ်ကို
ဩဂုတ်လ ၂၀ ရက်နေ့ မနက် ၈ နာရီတစ်ကြိမ် ည ၈ နာရီတစ်ကြိမ် စမ်းသပ်ထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်တာကြောင့် လှိုင်းတိုမီတာ ၁၆ / မက်ဂါဟဇ် ၁၇ဒသမ ၇၁ မှာ ဖမ်းယူကြည့်ပေးဖို့ မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်။
စမ်းသပ်ထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြစ်တာကြောင့် သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် မြို့နယ်အလိုက် အဆင်ပြေမပြေ နားထောင်ပြီး အသံဖမ်းယူပေးပို့ပေးခြင်းဖြင့် ကူညီပေးစေချင်ပါတယ်။
နေ့စဉ် မနက် ၈ နာရီ နဲ့ ည ၈ နာရီ တိုင်းမှာ
(မိနစ်၃၀)စာ တနေ့ကို နှစ်ကြိမ် ထုတ်လွင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
ရေဒီယိုကတော့ 10 Band Digital Radio ဆိုရင်ရပါပြီ
အိမ်တိုင်း တစ်လုံးစီ ဝယ်ထားကြဖို့လဲ တိုက်တွန်းပါတယ်။
တမူးမှာ မိုင်းဆွဲခံရလို့ ရဲမှူးနဲ့ ဒုရဲမှူးအပါ ၅ ဦးသေတယ်လို့ Myanmar Police CDM Channel က သတင်းထုတ်ပြန်
Like – 37K Share – 6033
ဒီနေ့ ဒီဇင်ဘာ၂၄ ရက်နေ့ Hashtag မှာ#NoFlyZoneInMyanmar ကိုထည့်သုံးပေးကြပါဖို့ Twitter Team for Revolution က တိုက်တွန်း
2021-08-18 at 10:20 AM
ထီထရောင်းတယ် ထီရောင်းတာ ဘယ်လိုလိုက်ဖမ်းရမှန်းမသိသေးဘူး ဟောအခု ရေဒီယိုတဲ့
Linn Aung Kyaw says:
2021-08-18 at 10:23 AM
Radio ဆိုင်တွေ မျက်ခုံးလှုပ်ပြီ
A Sone Thote says:
2021-08-18 at 10:25 AM
FM လိုင်းလားဗျ ဒါမှမဟုတ်
လွင်နေ လွှင့်နေ ပရိုဖိုင် ချိန်းလို့ ဖမ်းတာနဲ့ ထီရောင်းလို့ ဖမ်းတာနဲ့ အခုက သုံးနေတာက တရုတ်မိတ် ရေဒီယိုတော့ ဖမ်းလောက်ပါဘူးနော်
Nay Linn Htet says:
2021-08-18 at 10:32 AM
ေတာ္လွန္ေရးကုိပဲ အာရုံစုိက္ NUG ရယ္ … ဘာမွထပ္လုပ္ျပမေနနဲ့… အခ်ိန္ေတြကုန္ တယ္
2021-08-18 at 10:34 AM
ဖုန္ထဲက Radioနာ‌ေထာင္လို့ရဘူးလား ၀ယ္‌ေနရင္ပိုက္ဆံကုန္တယ္ တရုတ္ထုတ္‌ေတြဆို‌ေတာ့ ၀ယ္ခ်င္စိတ္မရှိက်ဘူး‌ေလ
Kyaw Kyaw Khant says:
2021-08-18 at 10:44 AM
Kõ Pĥÿõ အောက်က ခလုပ်လေးကို SW7ကို ရွှေ့
ပီးရင် လိုင်းရှာတဲ့အခါအခု ပုံထဲကအတံလေးရဲ့ အပေါ်ပိုင်းမှာ ရှာကြည့်ပါ
SW7မရမှ 8 တို့6တို့ ရှာကြည့်ပါ 😅
Khinsanwin Ksw says:
2021-08-18 at 10:47 AM
Radio ကိုလည်းဝယ်အုံးမှာ နားထောင်အုံးမှာ RFA BBC VOA. DVB အားလုံးလည်း နားထောင်တယ်
Pyi Thein Khant says:
2021-08-18 at 10:50 AM
9band world reveiver ဆိုရင်ရောရပါသလားခင်ဗျ
Htet Ko says:
2021-08-18 at 10:51 AM
KO Zaw Myo says:
2021-08-18 at 10:55 AM
နေ့ခင်းပိုင်း တနေကုန် တော်လှန်ရေးသီချင်းတွေနဲ့ လွှင့်စေချင်ပါတယ်ခင်ဗျ
ရေဒီယို ခေတ်ကကုန်သလောက်ပါ၊ ကျနော့ အသက် 15 နစ်က ယနေ့ 70 နှစ်အထိ radio သူရဲပါ၊ အခုလည်း US$100 တန် digital SW radio2လုံးနဲ့နေတာပါ၊ BBC VOA တောင် podcast အားကိုးနားထောင်နေရတာပါ၊ radio ကေါင်းတိုင်းမရပါ၊ Disturbance n jamming ထည့်စဉ်းစါးပါ၊ radio လွှင့်ခဲ့ရင်တောင် podcast တင်ပေးပါ၊ Internet ခေတ်ပါ၊ အကြံပြုတာပါ
Aung Zay Py says:
2021-08-18 at 11:17 AM
Free to air TV အစီအစဥ်လဲ လိုချင်မိတယ်
Shwe Htee says:
2021-08-18 at 11:19 AM
9 bands လောက်ဆိုရလာ ?
Aung Pyae Sone says:
2021-08-18 at 11:32 AM
AM Band (535KHz – 1600KHz) အတွင်းရအောင်လွှင့်နိုင်ရင် ပိုကောင်းပါမယ်။
Antique Radio တော်တော်များများက လိုင်းဆွဲအားကောင်းတော်လည်း SW3 အထိဘဲပါကြတာများလို့ AM မှာလွှင့်နိုင်ရင်အကောင်းဆုံးပါ။
နောက်ပြီး Podcast မှာလည်း ပြန်တင်ပေးပါ။
Yell Thway Ne says:
2021-08-18 at 11:43 AM
ဖုန်း radio နဲ့ ဖမ်းလို့ရလား
U Tint Swe says:
2021-08-18 at 11:48 AM
လူထုဆက္သြယ္ေရးေက ာ. အျခား..ဆက္သြယ္ ေရးေတဃပါ..ျဖတ္ေတာက္ေႏွာက္ယွက္မႈမျပဳႏိႈင္တဲ့. နည္းေတြ..လုပ္ေဆာင္သင့္ပါတယ္
Aye Kay Thi says:
2021-08-18 at 12:01 PM
12 brands radio receiver ဆို ရလားရှင့်
Nway Oo Wai Yan says:
2021-08-18 at 12:23 PM
ဓာတ်ခဲနဲ့သုံးလို့ရတာကို ဝယ်ပါ အားသွင်းpသုံးရတာကို မဝယ်ပါနဲ့ မီးပျက်ရင် တိုင်ပတ်ပါလိမ့်မယ်
2021-08-18 at 1:03 PM
Cmt‌ ပေးတဲ့သူများ ဘယ်လို ရေဒီယိုမျိုးဝယ်သင့်သလဲ ပုံ နမူနာလေးတွေပါ ပြပါဦး
Shwe Man Thu says:
2021-08-18 at 1:05 PM
နောက်ထပ် နောက်ထပ်တွေ အဆက်မပြတ် လာတော့မည်
Htet Thura says:
2021-08-18 at 1:19 PM
အေး မကြာခင်မှာ Radio နားထောင်ရတော့မယ့် အနေအထားတွေဖြစ်လာတော့မယ်ပေါ့။ မြန်မြန်ဖြစ်ပါစေကွာ။ ဖုန်းတွေသုံးမရရင် ဖနောင့်နဲ့ပေါက်ပစ်မယ်။ D Day သာမြန်မြန်စ။
San Mar Phyu Du says:
2021-08-18 at 1:28 PM
Tin Than Aye says:
2021-08-18 at 2:58 PM
Myat Nyein says:
2021-08-18 at 3:05 PM
ပုံလေးနဲ့ ပြ. ကူညီပေးကြပါနော်
2021-08-18 at 3:14 PM
RFA ေတာ့ဖမ္းလို့ရတာ
nug radio ေတာ့ရရင္ေျပာမယ္
Win Moe Thu says:
2021-08-18 at 3:24 PM
၈၈ တုံးက​ေတာ့ VOA BBC တို႔နား​ေထာင္​ခ်င္​ရင္​တိုးတိုး​ေလးဖြင္​့ၿပီးခိုး​ေၾကာင္​ခိုးဝွက္​နား​ေထာင္​ခ့ဲရတယ္​
2021-08-18 at 3:45 PM
Fm စနစ်နဲ့ ထုတ်လွှင့်ရင် ပိုကောင်မယ်ထင်တယ် ဖုန်းနဲ့လည်းအလွယ်တစ်ကူနားထောင်လို့ရတာပေါ့
キャウ・ トゥ says:
2021-08-18 at 4:08 PM
Ei Ei Phway says:
2021-08-18 at 4:18 PM
2021-08-18 at 6:14 PM
ဒီအမျိုးအစားဆိုရင်ရော နားထောင်လို့ရလားဟင် မသိလို့ပြောပြပါဦးနော်
Khant Min Htun says:
2021-08-19 at 1:05 AM
🎙Podcast(အွန်လိုင်း ရေဒီယို)တွေထဲမှာလဲ တင်ပေးဖို့အထူးတောင်းဆိုချင်ပါတယ်။
ကို ျဖိဳး says:
အိမ်ကလူကြီးတွေက သိပ့်မြင်ချင် ကြားချင်နေတာ။
Ah Htut says:
2021-08-19 at 10:46 AM
ဘယ်လို ဖမ်းရမလည်း နားမလည်လို့ပါ.
စိုင်းသူ ကို says:
2021-08-19 at 3:13 PM
15000 ပေးရတယ် ဆိုင်က
2021-08-21 at 11:33 AM
8band ဆိုရင် ကောမရဘူးလား အလင်းပြကြပါ အုံး friends
Mar Da Lay Nar says:
2021-08-21 at 3:08 PM
လိုင်းမဖမ်းတက်လို့ပါ သိတဲ့သူများရှိရင် ကူညီပေးပါ
2021-08-22 at 8:49 AM
NUG လိုင်း ဖမ်းမရလို့ ပြောပြပါဦးခင်ဗျာ
Kyaw Zin Htet says:
2021-08-22 at 7:41 PM
ဒီနေ့ဟာ အာဏာရူးတစ်စု ပြည်သူ့အာဏာကို လုယူထားတာ ၁၉၇ ရက်မြောက်နေ့ဖြစ်တယ်။…